Tempolin' i Sôlômôna - Wikipedia
Ny Tempolin' i Sôlômôna na Tempolin' i Salômôna (hebreo: מקדש שלמה / Mikdash Shlomo), na Tempoly Voalohany araka ny Baiboly, dia toeram-pivavahana naorin' i Sôlômôna mpanjaka tao Jerosalema tamin' ny taonjato faha-10 tal. J.K. (taona 957 tal. J.K.) mba hampitoerana ny Fiaran' ny fanekena. Noravan' ny tafik' i Babilôna izany tempoly izany. Nasolo an' ilay Tabernakely namboarina tany an-tany efitr' i Sinay ny Tempoly, araka ny Bokin' ny Deoterônômia (Deo. 12.2-27).
Tantantaran' ny Tempolin' i SôlômônaHanova
Fanomanan' i DavidaHanova
Fanorenana ny Tempoly VoalohanyHanova
Faharavan' ny Tempoly VoalohanyHanova
Ny firafitry ny Tempolin' i SôlômônaHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tempolin%27_i_Sôlômôna&oldid=1036787"
Dernière modification le 30 Aogositra 2021, à 10:25
Voaova farany tamin'ny 30 Aogositra 2021 amin'ny 10:25 ity pejy ity.